मरेको मुसाका कारण १९ हजार करोड डलर नोक्सन, कारण थाहा पाउँदा होस उड्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मरेको मुसाका कारण १९ हजार करोड डलर नोक्सन, कारण थाहा पाउँदा होस उड्यो
एजेन्सी । एक गर्भवती महिलालाई दिइएको सुपमा मरेको मुसा भेटिएपछि एक प्रसिद्ध चाइनिज रेष्टुरेण्टले १० करोड अमेरिकी डलरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।
चपेस्टिकले सुपबाट मरेको मुसा निकालेको तस्वीर अनलाइनमा भाइरल भएपछि शिआबू शिआबू नामको हटपट रेष्टुरेण्टको शेयर यो वर्षकै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
चीनको शेनडुंग प्रान्तको आउटलेटलाई अस्थायीरुपमा बन्द गरिएको छ । यो रेष्टुरेण्टले ती महिलालाई ५ हजार चिनियाँ मुद्रा युआन मुआब्जा दिने कोषिस गरेको बताइएको छ । स्थानीय समाचार एजेन्सीका अनुसार रेष्टुरेण्टले मुआब्जा दिने प्रयास गरेपछि उनले आफ्ना श्रीमानलाई सो विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
श्रीमानले यस्तो मुआब्जा अस्वीकार गरेका थिए । उनी मुआब्जा लिनुभन्दा पहिला आफ्नी श्रीमतीको पूर्ण स्वास्थ्य जाँच गराउन चाहन्थे ।
गर्भवती महिला ६ सेप्टेम्बरमा आफ्ना परिवारका साथ रेष्टुरेण्टमा गएकी थिइन् ।
जहाँ उनको खानामा मरेको मुसा फेला पर्यो । जब ती महिलाका श्रीमानले गर्भमा रहेको बच्चाको चिन्ता प्रकट गरे सो रेष्टुरेष्टका एक स्टाफले गर्भपात गराउन भने र २० हजार युआन दिने प्रयास गरे ।
सुपमा उम्लिएको मुसाको तस्वीर चिनियाँ सामाजिक मिडिया वेबसाइट भिबोमा फैलियो । र त्यहाँ हजारौं मानिसले रिस पोखेका थिए । एक प्रयोगक कर्ताले लेखेका थिए, ‘मलाई उल्टी आउने जस्तो भएको छ, म अब कहिल्यै पनि घरभन्द्या बाहिर खान सक्दैन ।’ ११ सेप्टेम्बरमा कम्पनीको शेयर मुल्य गएको वर्ष अक्टुबरपछि सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुग्यो । तर, बुधबारबाट भने यसको मार्केट भ्यालु विस्तारै माथि उक्लिन थाल्यो ।
रेष्टुरेष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरसफाईमा कुनै कमजोरी नभएकोमसेत जनाएको थियो । तर सो विज्ञप्ति पछि हटाइयो । त्यहाको प्रशासनले भने यो विषयमा छानविन गर्ने जनाएको छ ।